Bank of China dia nanambara fa tsy ara-dalàna ny fifampiraharahana crypto rehetra, nianjera i Bitcoin
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Bank of China dia nanambara fa tsy ara-dalàna ny fifampiraharahana crypto rehetra, nianjera i Bitcoin
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Crime • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fifanakalozana vola virtoaly any ivelany izay mampiasa Internet hanolorana serivisy ho an'ireo mponina an-trano dia heverina ho asa ara-bola tsy ara-dalàna ihany koa.
Ny andrim-panjakana ara-bola sy ny andrim-panjakana tsy andoavam-bola dia tsy afaka manolotra serivisy ho an'ny hetsika sy fiasa mifandraika amin'ny vola virtoaly.
Ny fananana nomerika voalohany eto an-tany amin'ny alàlan'ny kapitalisma eny an-tsena dia nidina mihoatra ny 5% ka hatramin'ny $ 42,000.
Ny crypto hafa dia nanaraka ny fihenan'ny fironana niaraka tamin'ny ether nilatsaka 10% ka hatramin'ny $ 2,800, raha ny dogecoin kosa nianjera mihoatra ny 8% ka hatramin'ny $ 0.20.
Nanambara ny drafitry ny fandraràna ireo andrim-bola, orinasam-bola ary orinasa internet tsy hanamora ny varotra cryptocurrency ny People's Bank of China, ary koa hanamafisana ny fanaraha-maso ireo loza mety hitranga amin'ny asa aman-draharaha cryptocurrency.
SARY FILE: sarivongana kilalao kely iray dia hita amin'ny fanehoana ny vola virtoaly Bitcoin aseho eo anoloan'ny sarin'ny sainan'i Shina amin'ity sary ity, 9 aprily 2019. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration
Ny mpandrindra sinoa dia nanamafy ny fijoroany henjana amin'ny vola dizitaly androany, nanambara fa tsy ara-dalàna ny hetsika varotra cryptocurrency rehetra ary mandrara ny fifanakalozana crypto any ivelany tsy hanome tolotra ho an'ireo mpampiasa vola sinoa.
"Ny fifanakalozana vola virtoaly any ivelany izay mampiasa Internet hanolorana tolotra ho an'ireo mponina an-trano dia heverina ho hetsika ara-bola tsy ara-dalàna ihany koa," ny Banky Shinoa navoaka tao amin'ny tranonkalany.
"Ny andrim-panjakana ara-bola sy ny andrim-panjakana tsy andoavam-bola dia tsy afaka manolotra serivisy ho an'ny hetsika sy fiasa mifandraika amin'ny vola virtoaly," hoy ny banky foibe.
Ny hetsika dia nandefa bitcoin sy vola virtoaly hafa milatsaka. Ny fananana nomerika voalohany eto an-tany amin'ny alàlan'ny kapitalin'ny tsena, Bitcoin, nilatsaka 5% ambany ho $ 42,000. Ny crypto hafa dia nanaraka ny fihenan'ny fironana niaraka tamin'ny ether nilatsaka 10% ka hatramin'ny $ 2,800, raha ny dogecoin kosa dia nianjera nihoatra ny 8% ka hatramin'ny $ 0.20, hoy ny tranokala Coinmarketcap.
Ny fanapaha-kevitra farany natao dia ampahany amin'ny fampielezan-kevitry ny fanjakana Shinoa manohitra ny vola crypto. Tany am-piandohan'ity taona ity dia nandrara ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany amin'ny toeram-pivarotana bitcoin lehibe toy ny Sichuan, Xinjiang ary Inner Mongolia i Beijing, izay nahatonga fidinana an-tsokosoko tamin'ny alalàn'ny fanodinana bitcoin, noho ny mpitrandraka maro naka ny fitaovany ivelan'ny Internet.